भारतको कोरोना संकटले कसरी पूरै दुनियाँलाई प्रभाव पार्छ ?
भारतको कोरोना संकटले कसरी पूरै दुनियाँलाई प्रभाव पार्छ ? भारतको अहिलेको स्थितिले सबैलाई के सन्देश दिन्छ भने, जबसम्म दुनियाँका सबै सुरक्षित छैनन् तबसम्म कोही पनि यसबाट बचिरहन सक्दैन ।
बीबीसी । कोरोनासँग संघर्षरत् भारतको भयावह दृश्यले यतिबेला पूरै दुनियाँलाई स्तब्ध बनाएको छ । तर विश्वविद्हरुका अनुसार यो संकट भारतलाई मात्र नभएर विश्वका सबैमाथि आइपरेको छ
विश्व स्वास्थ्य संगठनकी प्रमुख वैज्ञानिक डाक्टर सौम्या भन्छिन्, “यो भाइरसले कुनै देशको सिमाना या राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, धर्म केही पनि हेर्दैन । र हाल भारतमा जे भइरहेको छ त्यो दुर्भाग्यवश् अरु मुलुकहरुले पनि भोगिसकेका छन् । ”
कोरोना महामारीले यो विश्व कसरी अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने सबैलाई राम्ररी बुझाएको छ । यसको अर्थ यदि कुनै देशमा संक्रमण दर उच्च छ भने त्यो अरु मुलुकहरुमा पनि सर्ने निश्चित छ । यात्रा प्रतिबन्ध, विभिन्न परीक्षणका माध्यम, क्वारेन्टिनका बावजुद संक्रमण फैलने जोखिम कायमै रहन्छ । र यसमा कुनै यात्री भाइरसयुक्त क्षेत्रबाट आएको छ भने उसले रोग बोक्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । जस्तै न्यु दिल्लीबाट हङकङसम्मको हालैको एक उडानमा ५० यात्रुहरु कोरोना पोजेटिभ फेला परेका थिए ।
तर भारतको उच्च संक्रमण दरबारे अर्को ठूलो चिन्ताले पनि सबैलाई सताइरहेको छ । त्यो हो ‘भेरियेन्ट’ ।
भारतमा उत्पन्न बी.१.६१७ं. नामक सो भेरियेन्टलाई ‘डबल म्युटेन्ट भाइरस’ पनि भनिन्छ । यसमा भाइरसको स्पाइक प्रोटिनमा दुई मुख्य म्युटेसन या परिवर्तन भएका छन् । स्पाइक प्रोटिन मार्फत नै भाइरसले हाम्रा सेलहरुलाई संक्रमित गराउन सक्छ ।
यस्तोमा ल्याबमा गरिएका केही परीक्षणका नतिजामा यो भेरियेन्ट सुरुवाती भन्दा बढी संक्रमक रहेको र हाम्रो प्रतिरोधात्मक प्रणालीले उत्पादन गर्ने एन्टिबडिजलाई पनि यसलाई परास्त गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
वेलकम स्यांगर इन्सटिच्युटमा कोभिड–१९ जेनोमिक्स इनिसिएटिभका निर्देशक डाक्टर जेफ बेरेट भन्छन्, “तरपनि अहिलेसम्म सो म्युटेसन विरुद्ध भ्याक्सिनले काम नगर्नेबारे भने कुनै प्रमाण छैन । त्यसैले मेरो विचारमा हामीले सबै ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ । हतासिएर, आत्तिएर बस्नु चाहिँ हुँदैन । ”
यसमा अर्को गम्भीर कुरा के छ भने, जति बढी संक्रमितको सङ्ख्या हुन्छ त्यति नै नयाँ भेरियेन्ट उत्पन्न हुने सम्भावना पनि बढ्न जान्छ । किनकी प्रत्येक नयाँ संक्रमणले भाइरसलाई आफू भित्र परिवर्तन ल्याउने मौका दिइरहेको हुन्छ । यस्तोमा नयाँ म्युटेसनमाथि हाल प्रयोगमा ल्याइएका खोपहरु प्रभावकारी भएनन् भने समस्या धेरै गम्भीर बन्न पुग्नेछ ।
युके कन्सोर्टियमकी कोभिड निर्देशक, प्रोफेसर सेरोन पिकक भन्छिन्, “भाइरल भेरियेन्टलाई उत्पन्न हुनबाट रोक्ने एउटा उपाय भनेको भाइरसलाई हामी भित्र दोहोरिएर विकसित हुन नदिनु हो । यसको अर्थ विश्वव्यापी रुपमा, रोगको मात्रालाई नियन्त्रण गरेपछि मात्र यो सम्भव छ । ”
यसका लागि लकडाउन र सामाजिक दुरीका उपायहरु उचित हुनेछन् तर खोपले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ । जुन भारतमा अहिले एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । भारतमा १० प्रतिशत भन्दा कम जनङ्ख्याले खोपको पहिलो डोज लगाएका छन् भने केबल २ प्रतिशत मात्र पूर्ण रुपमा खोप लगाएका छन् । जबकी भारतको सेरम इन्सटिच्युट अफ इन्डिया विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादनकर्ता हो । त्यसैले भारतमा संक्रमण सङ्ख्या आकाशिनुले बाँकी विश्वलाई प्रभावित गर्ने यो पनि एउटा कारण हो ।
मार्चमा संक्रमण दर बढ्न थालेपछि भारतका सरकारी निकायहरुले अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका खोपको निर्यात बन्द गरेका हुन् ।
यसले संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सञ्चालित ‘कोभ्याक्स’ कार्यक्रमलाई पनि प्रभावित गर्यो । कोभ्याक्सले मध्यम र कम आय भएका मुलुकहरुलाई खोप वितरण गरिरहेको थियो । सोमबार मात्र कोभ्याक्ससँग सहकार्य गरिरहेको ग्लोबल भ्याक्सिन अलायन्स (गाभी) ले भारतले कहिलेबाट खोप आपूर्ति जारी गर्नेछ भन्ने पर्खाइमा रहेको बताएको थियो ।
त्यसैले पनि यसबाट धेरै देशको खोप वितरण प्रभावित हुने निश्चित छ । किनकी अहिलेका लागि भारतमा उत्पािदत अधिकतम डोजहरु स्वदेशी प्रयोगतर्फ केन्द्रित गराइनेछ । र भारतको संकटपूर्ण अवस्था हेरेर त्यो जरुरी पनि भएको वैज्ञानिकहरु बताउँछन् ।
डब्लूएचओकी डाक्टर सौम्या भन्छिन्, “हामीले खोप अभियानलाई सम्भव भएसम्म तिव्र गतिमा अघि बढाउन जरुरी छ नत्र भाइरसले पनि एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न, त्यसै अनुसारको प्रयास गर्नेछ र परिणाम भयानक हुन सक्छ ।” विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा एक वर्ष बितिसक्दा पनि महामारी सहज हुने कुनै संकेत देखिएको छैन किनकी भाइरस एकपछि अर्को देशमा हावी भइरहेको छ ।